‘द कपिल शर्मा शो’ का कलाकार र उत्पादकलाई ठुलो झट्का लागेको छ। कुनै बेलाको निक्कै लोकप्रिय र चर्चित यो कमेडी शो अब उत्कृष्ट १० मा रहेन। समाचार अनुसार यसको लोकप्रियता घटेको हो। उत्कृष्ट १० बाट यसको टीआर...
‘ब्रेकअप’मा हुनुहुन्छ? अब साथी बन्नुस्
अधिकांश मानिस ब्रेकअपपछि सम्बन्ध टुटाउन खोज्छन्। किनभने पुराना सम्झना र सँगै बिताएका प्रेमिल पलहरूले उनीहरुलाई घरिघरि चुच्चा काँडाले झैं घोचिरहेको हुन्छ। यस्तोमा त्यही पुरानो मानिससँग साथीत्वको नाता फ...
जुन दृश्य भविश्यका लागि जिम्मेवारीबाेध र प्रेरक सामग्री बन्न पुगेका छन्। सञ्चारकर्मी २१ वर्षीया रजिला श्रेष्ठले अहिले त्यति बेलाको परिस्थितिलाई छायांकन गरेर राखेकै कारण स्याबासी पाइरहेकी छिन्। इन्टरने...
Ashok Adhikari 3.8k 2
अलिअलि उमेर ढल्किएर के भो!
माेफसलमा बसेर सांगीतिक क्षेत्रमा लाग्न सजिलाे छ? 'पटक्कै छैन, पहिलाे कुरा त माेफसलमा प्रविधि छैन, प्रविधि भएपनि काठमाडाैंलार्इ केन्द्र मान्ने प्रवृत्तिका कारण राजधानी बाहिर बसेर काम गर्न असाध्यै गाह्र...
अन्तर्राष्ट्रिय महिला फिल्म फेष्टिबल
महिला फिल्म निर्माता तथा निर्देशकहरुको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथका काठमाडौंमा १ दिने अन्तर्राष्ट्रिय महिला फिल्म फेष्टिबल आयोजना गरिएको छ। महिला फिल्म फेष्टिबल, नेपाल च्याप्टरले सोमबार आयोजना गरे...
कार्यक्रममा एकसमय दर्शकहरूले एकोहोरो ‘अमृत’, ‘अमृत’ भनेर नाराबाजी गर्दा नेपथ्यका मुख्य गायक एवम् अगुवा अमृत गुरुङको आँखा रसाएको देखिन्थ्यो। उनले वाल्यकालका घटना सम्झँदै त्यसै चौरमा खेलेका क्षण र उतिबे...
Suvadin Desk 3.7k 0
२ सय किलोकी मोडल, जो लाखौं कमाउँछिन्
सेलिब्रेटी बनेकी बाबीको थार्इ नै ६० किलोका छन्। उनले भनेकी छन्, ‘बेलायतीहरुलाई मेरा यी थार्इ साह्रै आर्कषक लाग्छन्, उनीहरु धेरै रकम खर्चेर मसँग तस्बिर खिचाउँछन्।’ ४३ वर्षीया बबी मोडेल हुन्। उनका कयाैं...
शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्लीमा ६४औं राष्ट्रिय फिल्म अवार्ड घोषणा गरिएको छ। अक्षयकुमारलाई उनको फिल्म ‘रुस्तम’का लागि उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड प्रदान गरिएको छ। यो फिल्म अघिल्लो वर्ष निर्माण भएको थियो। अ...
विद्यालय पूर्वाधार र विद्यार्थीको शिक्षामा नेपथ्य
‘कोका-कोला फेरि उठ्ने छ नेपाल’ अभियान कोकाकोला कम्पनीको सन् २०१५ देखिको निरन्तरता हो, जसले २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाली नागरिकहरूले देखाएको सकारात्मक सोच र धैर्यतालाई सम्मान गरेको छ। यो अभियान यसको स्म...
Suvadin Desk 2.4k 0
अमेरिकाबाट फर्केपछि नायक रमेश उप्रेतीले संकल्प गरेका छन् - नेपाली फिल्म क्षेत्रमा हल्का रुपमा प्रस्तुत नहुने। पुनरागमनको पहिलो फिल्मबाट त्यो संकल्प त पूरा भएन। अधुरो संकल्पलाई पूरा गर्न उनी उनी रजतपटम...
Khilanath Dhakal 12.3k 39
प्रमाेद खरेलकाे स्वरमा डिपिएलकाे अाधिकारिक गीत (म्...
नेपाली संगीतिक क्षेत्रका लोकप्रिय गायक प्रमाेद खरेलकाे स्वरमा बहुप्रतिक्षित सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी प्रिमियर लिगकाे अाधिकारिक गीत सार्वजनिक गरिएकाे छ। हाैसला, जुनुन ... बाेलकाे गीतले नेपालमा क्रिकेट क्र...
Suvadin Media 12.9k 18
प्रमाेद खरेलकाे स्वरमा डिपिएलकाे अाधिकारिक गीत (म्युजिक भिडियाेसहित)
प्रगतिको शिखर चुम्दै गरेका चर्चित भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको कमेडी शो संकटमा पर्दै गएको छ। केही दिनअघि हवाई यात्राकै क्रममा मदिरा सेवन गरेर आफ्नै सहकर्मीसँग दुर्व्यवहार गरेको घटनापछि उनी विवादको घेरा...
नेपथ्यको रजत जन्मोत्सवको प्रारम्भ ब्याण्डको नयाँ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिकीकरणसँगै सुरु भएको छ। ब्याण्डको जन्मदिनअर्थात् अप्रिलको पहिलो तारिख यसका मुख्य गायक एवं अगुवा अमृत गुरुङले सामाजिक सञ्जा...
Suvadin Desk 6.7k 9
धुर्मुस–सुन्तलीलाई उत्कृष्ट नागरिक सम्मान
वीरता जेसीजले सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई २०७३ को उत्कृष्ट नागरिक सम्मान प्रदान गर्ने भएको छ। उनीहरुको अभियानलाई सघाउन रकम संकलन थालिएको छ। झापा, गौरादह घर भई कलाकारिता क्ष...
लोक परम्परादेखि चलिआएको लोक गीत आज पाश्चात्य साहित्यको बढ्दो प्रभावका कारण सङ्कट अवस्थामा पुगिरहेको छ। नेपाली युवाहरूको लोक गीतको मोह क्रमशः घट्दो अवस्थामा छ। क्षेत्रगत प्रतिस्पर्धाको कारण पनि लोकगीतक...
Chitra Kumar Limbu 4.1k 0
ल्लो समय बलिउड हस्ती अरबाज खान र मलाइका अरोडा व्यावसायिकभन्दा पनि व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर बढी चर्चामा छन्। उनीहरुबीच डिभोर्स भएको समाचार आयो। त्यही बीचको एक अर्को समाचारले त अरबाजलाई निक्कै अप्ठेरोमा प...
Suvadin Correspondent 11.1k 23
Suvadin Desk 2.5k 1